Siminaar lagu baaranayo wada shaqanta maamulka iyo bulshada G/Baay oo ka furmay Baydhabo “Sawirro” – Radio Muqdisho
Siminaar lagu baaranayo wada shaqanta maamulka iyo bulshada G/Baay oo ka furmay Baydhabo “Sawirro”
Hay’adda CBD oo ah hay’ad ka shaqeysa arrimaha nabadda iyo horumarinta dimoqraadiyadda ayaa maanta tababar ku saabsan sida ay u wada shaqeyn karaan maamulka iyo shacabka gobolka Baay u qabatay qaar ka mid ah maamulka iyo bulshada halkaasi ku nool.
Tababarkan oo socon doono muddo sanad ah ayaa mas’uuliyiinta waxa ay gacan ka geysan doonaan sidii bulshada iyo maamulka uu u wada shaqeyn lahaa, isla markaana sare loogu qaadi lahaa sida ugu fudud ee ay dhinacyada kala duwan u wada shaqeyn lahaayeen, waxaana lagu ogaanayaa baahiyaha ay qabaan bulshada degmada Baydho ku dhaqan iyo sida wax looga qaban karo.
Furitaankii munaasabadda waxaa ka qeyb galay Wasiiro ka tirsan Koonfurgalbeed Soomaaliya Guddoomiyaha Gobolka Baay, Guddoomiyaha Degmada, gudiyo ka kala socoday xaafadaha magaalada Baydhabo iyo odoayasha dhaqanka Koonfurgalbeed.
Cabdixaliim Bashiir Macalin oo ah madaxa mashruuca ayaa tilmaamay in tababarka uu yahay sida lagu xoojin karo wada shaqeyn dhex marta bulshada qeybaheeda kala duwan iyo maamulka heer gobol iyo mid degmo intaba
Qaar ka mid ah dhallinyaradii ka qeyb galay ayaa soo dhaweeyay tababarkan sare loogu qaadayo aqoonta bulshada magaalada Baydhabo, si ay uga qeyb qaataan horumarka gobolka.
Guddoomiyaha Gobolka Baay Cabdirashiid Cabdullaahi Maxamed ayaa kula dardaarmay ka qeyb galayaasha tababarka inay ka faa’iideystaan fursadan ay heystaan, si loo xoojiyo wada shaqeynta shacabka iyo maamulka ka dhexeeya.
Sawir qaade: Siraaji Sheekh Isxaaq
Wasiir ku-xigeenka caafimaadka oo tababar u furay howlwadeenno caafimaad
Jaamacadda Zamzam oo kuliyad cusub lagu soo kordhiyay “SAWIRRO”